REENOEMANN: အဖေများနေ့ ( အမှတ်တရ)
ကိုရီနို ....... ညီအစ်ကိုချင်း စာနာမိပါတယ်ဗျာ ... သားတစ်ယောက်ရဲ့ သိတတ်နားလည်မှုကိုတော့ အရင်ကတည်းက သိပြီးသားမို့လို့ အကျယ်ချဲ့ပြီး မချီးမွန်းတော့ ပါဘူး .... မိဘကို သိတတ်နားလည်တဲ့ သား ဘယ်အခြေအနေကိုပဲ ရောက်ရောက် အောင်မြင်မှုတွေ ထွေးပိုက်ဆုပ်ကိုင်နိုင်မှာပါ ... အစစအရာရာ အဆင်ပြေပါစေ ..
ရီနို့ဖေဖေ ကောင်းရာ သုဂတိရောက်နေမှာပါကွယ်..
မိဘကျေးဇူးသိတတ်တဲ့ ရီနို အားလုံးအဆင်ပြေပါစေကွာ..
မိန်းမယူ... ကလေးမွေးပြီး... မွေးလာတဲ့သားလေးတွေကိုကျမှ အဖေချစ်ခဲ့သလို စုပြုံပြီး ချစ်ပစ်လိုက်...
"မင်းတို့ဖိုးဖိုးက ငါ့ကိုအဲဒီထက်ပိုချစ်ခဲ့တာကွ" လို့ ပြန်ပြောပြလိုက်...
အဖေ အမေကို သိတတ်တဲ့ သားသမီးက ဘယ်တော့မှ အောင်မြင်မှုတွေ ဝေးမနေပါဘူး မောင်လေး ၊ အဆင်ပြေပါစေ
တို့အဖေကတော့ တို့တတိယနစ်အောင်စာရင်းကို လူကိုယ်တိုင်လာကြည့်သွားတယ်။ အမှတ်တရဘဲ။နာမည်ကိုကြီးလို့.
ဂုဏ်ယူလို့ဘဲလား. သမိးကို မယုံလို့ဘဲလား
စကားနည်းတဲ့သားအဖချင်းတူတော့တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် verified မလုပ်လိုက်ကြမိဘူ
တိုလဲ အဖေကိုသိတ်ချစ်တယ်။ ၁၀ နစ်ကျော်သွားပြီ. မမေ့သေးဘူး. အေးလေ. မေ့စရာလား.
အဖေနဲ့အမေ ကို အရာရာ ရှေ့ တန်းတင်
မိဘတိုင်းကတော့ သားသမီးတွေကို ချစ်ကြတာကြီးပါပဲ။
ကိုရီနိုက တော်ပါသေးတယ် ကျနော်ဆို ကြာပေါ့ အဖေ မရှိတာ ဒါပေမဲ့ ကျနော်လဲ ယုံကြည်ပါတယ် တကယ်၍သာ အဖေရှိခဲ့ရင် ကျနော့်ကိုလဲ သိပ်ချစ်မှာပဲလို့ပေါ့..
အဖေကို သိပ် ချစ်တဲ့သား
ထာဝရ အောင်မြင်မှု သရဖူ ဆောင်းနိုင်ပါစေရှင်
မောင်လေးရဲ့ အဖေကိုချစ်တဲ့ စိတ်လေးကိုလေးစားပါတယ်။ သားသမီးတိုင်း အပေါ်မှာ တူညီတဲ့ မေတ္တာတွေနဲ့ မိဘတွေက ပေးစပ်သူတွေပါ။
မောင်လေးရီနိုရေးထားတဲ့ အဖေအကြောင်းပို့စ်လေးဖတ်ရတော့ မမရဲ့ဖေဖေ့ကို
လွမ်းမိသွားပြန်တယ်. လွမ်းနေတာကတော့ အမြဲပါပဲ
လေ... ဖေဖေက မမကိုအရမ်းချစ်တယ်.. မမလည်းဖေဖေကို အရမ်းချစ်တာပဲ.. ဖေဆေုံးသွားတာ
တမလွန်ဘ၀မှာ ကောင်းရာမွန်ရာဘ၀တစ်ခု ရရှိနေမှာသေချာပါတယ်။